त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो करणी गरे ! – Jagaran Nepal
विराटनगर : सामूहिक करणीमा परेकी एक किशोरी गर्भवती भएको घटना बाहिरिएको छ। मोरङको उर्लाबारीकी १७ वर्षीया किशोरीको पेटमा चार महिनाको गर्भ रहेको तथ्य खुलेको हो। उर्लाबारी नगरपालिका-५ का ३० वर्षीय प्रदीप खतिवडा र २१ वर्षीय भेषराज आचार्यले गत फागुन २७ गते किशोरीमाथि सामूहिक करणी गरेका मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए। करणीबाट किशोरीको गर्भ बसेको उनले जानकारी दिए। चकलेटमा खराब कुरा मि’साएर खुवाउँदै अ’र्धबे’होस बनाएर खतिवडा र आचार्यले किशोरीमाथि पा’लैपा’लो करणी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
घरमा कोही पनि नभएको र दिउँसो घरमा एक्लै बसिरहेका बेला किशोरी सा’मूहिक करणीको सि’कार भएको राईले बताए। ‘घरका अभिभावक काममा गएको बेला दुई युवा पुगेछन्’, उनले भने, ‘चकलेटमा नराम्रो दवाई मि’साएर खान दिएपछि अ’र्धचेत भएकी बालिकालाई करणी गरेको पाइयो।’
खतिवडा र आचार्यले यस विषयमा कसैलाई पनि नभन्न र भनेमा सकिदिने ध’म्की दिएका थिए। त्यही ड’र र त्रा’सका कारण किशोरीले घटनाबारे कसैलाई बताइनन्। महिनावारी रोकिएको लामो समय भएपछि पीडित आमाले सोधीखोजी गर्न थालेपछि घटना बाहिर आएको हो। करणीमा संलग्न दुवै जनाविरुद्ध पीडित किशोरीका अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा गत सोमबार किटानी जाहेरी दिएका छन्। जाहेरीका आधारमा खतिवडा र आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा करणीको तथ्य खुलेको उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक सुवास राईले बताए।
उनका अनुसार दुवै जना आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका हुन्। ‘घटनामा संलग्न युवाहरु पहिले पनि पीडित बालिकाको घरमा आउजाउ गर्ने गरेको पाइयो’, राईले भने, ‘तर फागुन २७ गते घरमा कोही पनि नभएको अवस्थामा पुगेर बालिकामाथि करणीगरेर हिँडेछन्।’ कोसी अस्पताल विराटनगरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा किशोरी गर्भवती रहेको पुष्टि भएको हो।
यो पनि : घरायसी समान किन्न भारत जान छोडे नेपाली, भन्छन्, अब त नेपालमै किन्ने हो भारत त खुले पनि गइदैन !
बाँकेको नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रुपैडिहा अहिले सुनसान छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ महामाारीपछि नेपाली उपभोक्ताको उपस्थिति नहुँदा भारतीय बजार रुपैडिहा सुनसान बनेको हो ।
नेपालगञ्ज–१० का गणेश शर्मा भन्नुहुन्छ, “कोरोना महामारीको आमनेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएको छ । यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर र स्वदेशी वस्तुको गुणवत्ता चिन्ने अवसर पनि दिएको छ ।” रुपैडिहा बजारमा अहिले नेपालीहरुको प्रवेश शून्य प्रायः छ । आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीको ओखती खरिदका लागिमात्र नेपालीहरुलाई रुपैडिहा प्रवेशको अनुमति दिने गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताए ।
अर्कोतर्प, बन्दाबन्दीको झण्डै एक महिनाअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि यहाँका उपभोक्तालाई सहज बनाएको छ भने रुपैडिहा प्रतिको मोह पनि धेरै घटाएको पाइन्छ । “रुपैडिहा बजारभन्दा भाटभटेनीमै सस्तो पाइँदो रहेछ, फेरि जे खोज्यो त्यही सामान एकै ठाउँमा पाउने भएपछि अब सीमापारि गइरहनु नै परेन्”, नेपालगञ्जकी गृहिणी आरती थापाको भनाइ छ ।